May 12, 2021 - Babal Khabar
May122021 by EditorNo Comments
होसियार निषेधाज्ञा उल्लंघन गरी बिहेभोज गर्ने लाई पक्राउ गर्न थलिएको छ….
पर्वत/- जलजला गाउँपालिका–२ मा निषेधाज्ञाको समयमा बिहेभोज गर्ने दुई बेहुलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । कोरोनाको हटस्पट रहेको जलजला– २ माझफाँटमा बिहेको भोज गर्दै गर्दा प्रहरीले वर्ष २३ का प्रदीप परियार र वर्ष २४ का राजकुमार परियारलाई पक्राउ गरेको हो । माझफाँटको छुट्टाछुट्टै दुई स्थानमा बिहेभोजसहित वैवाहिक समारोह आयोजना गरिएको थियो । उक्त गाउँमा ७५ जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहे तथा मृत्यु संस्कारमा १० जनाभन्दा बढी सहभागी नहुने र सहभागी भएको पाइएमा कारबाही गर्ने गरी आदेश जारी गरेको छ । बिहेभोजमा ३०–४० जना गाउँले भेला भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी पुगेपछि सहभागीहरू भागाभाग गरेका थिए । प्रहरीले सबै भागेपछि बेहुलालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरूलाई आवश्यक कारबाहीपछि छोड्ने प्रहरीले जनाएको छ । प्रशासन र स्थानीय तहले भोजभतेर गरेर भिडभाड गरेमा कानुन
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न, झलनाथ – नेपाल समुहले संसद पदबाट राजिनामा दिने
एमाले नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बुधबार ट्विट गर्दै रावलले आफुहरुले सांसद पदबाट राजीनामा गरी स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, असाधारण समस्याको समाधान गर्न असाधारण पाइला चाहिन्छ । थप राष्ट्रिय हित, पार्टी विधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रधानमन्त्री केपीलाई रोक्न पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले सांसद पदबाट राजीनामा गरी सो स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । यो राजनीतिक नैतिकता र कानुनी दृष्टिले धेरै उचित छ ।
बुटवलमा चरम अभाव भएपछि सिमरा र चितवनबाट नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा अक्सिजन ल्याइएको छ । अक्सिजनको अभावमा अस्पतालमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुन थालेको अवस्थामा बुधबार साँझ हेलिकोप्टरमा नेपाली सेनाले अक्सिजन ल्याइएको हो । सिमरा र चितवनबाट हेलिकोप्टरमा ४० सिलिन्डर अक्सिजन ल्याइएको छ । बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा अक्सिजन सकिएपछि बिमारीको आइसियुमा नै मृत्यु https://babalkhabar.com/archives/17274 भएको थियो । समयमा अक्सिजन आपूर्ति नहुँदा रुपन्देही र नवलपरासीका बिरामीको ज्यान गएको उनले बताए । रुपन्देहीका चार र नवलपरासी बर्दघाटका एक बिरामीको मृत्यु भएको थियो । रुपन्देहीमा तीनवटा अक्सिजन उद्योग छन् । ती उद्योगले दैनिक ११ सय सिलिन्डर उत्पादन गर्छन् । तर, दैनिक माग २१ सय ५० रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख राजेन्द्र गिरीले बताए । रुपन्देहीमा करिब एक दर्जन अस्पताल छन् । तीम
नेपाल चिकित्सक संघले ‘रेड अलर्ट’ को घोषणा गरेको छ । कोरोनाका कारण गम्भीर अवस्था सिर्जना भईसकेको निष्कर्ष निकाल्दै संघले देशभर रेड अलर्ट घोषणा गरेको हो । दिनदिनै बढिरहेका कोरोना संक्रमितको सङ्ख्यालाई हाल भएको नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने संघका् दाबी छ । संघले सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सर्वसाधारणलाई एकजुट भएर महामारीविरुद्ध लड्न अपिल गरेको छ । सङ्क्रमितहरू अस्पताल आउन नपाएको, आएकालाई अस्पतालले फर्काउन बाध्य भएको, बचाउन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै पनि अक्सिजनको अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको लगायत दृश्यहरू देखिनु पीडादायी भएको भन्दै संघले नागरिकको जीवन रक्षा भन्दा ठूलो अरु केही नभएको तर्फ सचेत गराएको छ । संघले कोरोनाको पहिलो लहर सुरु भएकै बेला गत वर्ष भयावह अवस्था आउन सक्ने भन्दै तयारी थाल्न सरकारलाई दिएको सुझाव नमान्दा अहिले मानिसहरुले ज्यान
कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेको अवस्थामा अक्सिजन अभाव हुन नदिन उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव प्रेम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा टाक्स फोर्स बनेको छ । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले मन्त्रालयका सह–सचिव प्रेम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको हो, टाक्स फोर्सले अहिले काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ । उपत्यका बाहिर भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला स्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले काम गर्ने र संक्रमितको चाप काठमाडौँ उपत्यकामा बढी रहेकले उपत्यकालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिएको टाक्स फोर्सका संयोजक एवम् उद्योग मन्त्रालयका सह–सचिव श्रेष्ठ बताउँछन् । टाक्स फोर्सका संयोजक श्रेष्ठका अनुसार अहिले कोभिड संक्रमितको उपचार भईरहेका अस्पतालका लागि अक्सिजनको कोटा तोकिएको छ । गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहित
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बुधबार ९ हजार ३०५ थपिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरमा १६८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार आज थपिएका संक्रमितमध्ये सबै भन्दा बढी काठमाडौंका ३,२५० जना, ललितपुरका ४४८ जना र भक्तपुरका २२६ जना रहेका छन् । यसरी बुधबार उपत्यकामा कुल तीन हजार ९२४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । बाकी उपत्यका बाहिर विभिन्न स्थान बाट रहेको जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार विगत एक दिनमा कोरोना मुक्त हुने चार हजार ४४४ जना रहेका छन् । यसैगरी २० हजार ३६२ पीसीआर परीक्षण र ४२४ एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो । पीसीआर विधिबाट नौ हजार २३८ र एन्टिजेन विधिबाट ६७ जनामा कोभिड १९ पुष्टि भएको हो । हाल देशभरमा कुल एक लाख एक हजार ६३४ जनामा संक
काठमाडौ / काठमाडौ लगायत देश भरि नै कोरोना कहरले गर्दा नागरिक जनजीबन अश्तब्यस्थ भई रहदा नेपाल सरकार तथा सहरी बिकाश मन्त्रालयले भने नागरिक तथा देश प्रतिको उत्तर दायीत्व लाई बेवास्ता गर्दै ललितपुर स्थित गोदावतरी नपा ३ मा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको प्रमुख आतित्य्या मा 'गोदावरी सन्राइज' (सम्मेलन केन्द्र) उदघाटन को लागी उच्चपदस्त कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्ति तथा संघ सस्था लाई पत्राचार गरि उपस्थिति को लागि आग्रह गरेको छ। स्रोत : सामाजिक संजाल
रुपन्देही/- रुपन्देहीको बुटवलस्थित बुटवल उपमहानगर पालिका तथा लुम्बिनी प्रदेश ले संचालन गरेको बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालको आइसियुमा अक्सिजन सकिएपछि ५ जनाको मृत्यु भएको छ । अस्पतालको आइसियु कक्षमा उपचाररत बिरामीको मृत्यु भएको सुचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले जानकारी गराए । मृत्यु हुनेमा १ महिला र ४ पुरुष छन् । अक्सिजनको अभावमा २९, ५२, ५४, ४४ र ५२ वर्षीय संक्रमितको मृत्यु भएको उनले जानकारी गराए । स्वास्थ्य मन्त्रालय, निर्देशनालय, उपमहानगरपालीका जताततै जानकारी गरायौं, उनले भने, १० वटा सिलिन्डर ल्याएका छौं, त्यसपछि के हुन्छ थाहा छैन । अब अक्सिजन नआए अस्पतालमा रहेका सबै बिरामीको ज्यान जोखिममा रहेको भन्दै उनले यसअघि पनि पटकपटक जानकारी गराउँदै आइसियु र एचडीयुमा जसोतसो व्यवस्थापन गरिए पनि अहिले स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको बताए ।
काठमाडौ । भारतमा अहिले दोस्रो लहरमा फैलिएको कोरोना सबैभन्दा बढी संक्रामक र खतरा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लूएचओले जनाएको छ। भारतमा पहिलोपटक देखिएको कोरोनाको नयाँ प्रकार हाल विश्वमै सबैभन्दा बढी संक्रामक भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ । डब्लुएचओले भारतमा फैलिएको कोरोनाका बारेमा विश्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसले थप खतरा निम्त्याउने भन्दै डब्लुएचओली विश्वलाई सचेत गराएको हो । आफ्नो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भारतीय भेरियन्ट अन्य भेरियन्टभन्दा संक्रामक भएकाले यस विषयमा विश्वले ध्यान दिनुपर्ने डब्लूएचओको भनाइ छ। यो भेरियन्ट अहिले ३० देशमा फैलिसकेको पनि जानकारी दिइएको छ। यसअघि बेलायती भेरियन्ट सुरुवातको कोरोना भाइरसभन्दा ७० गुणा संक्रामक भएको बताइएको थियो। यो बेलायती भन्दा पनि बढी संक्रामक भएको डब्लुएचओले जनाएको छ । बेलायती, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका साथै यतिबेला आफ्नै देशमा देखिएको
गण्डकी प्रदेश /कास्की — राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको राजमोले नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको ह्रवीपलाई उल्लंघन गर्दै संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापाले सत्तारुढ दल एमालेलाई नै साथ दिने भएपछि राजमोले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सांसद थापाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई स्पष्टीकरण दिन लागेका छन् । पार्टीले उनलाई एक घण्टाको समय दिएको छ । पार्टीभित्र नियम, विधि, विधान हुन्छ, उनले भने, नियममा नचल्ने जोकोहीलाई पनि पार्टीले कारबाही गर्छ । जनमोर्चाले अहिलेसम्म बेइमान गरेको थिएन । पहिलोपटक ठूलो दुर्घटना भयो । राजमो बोलेपछि गर्छ- भन्ने जुन अडान थियो त्यसमा दाग लागेको उनको भनाइ थि